Universal Tv Live - Dowladda Somaliya oo sheegtay Shabaab inaysan hor istaagi kari...
Dowladda Somaliya oo sheegtay Shabaab inaysan hor istaagi karin gurmadka abaaraha dalkaXukuumadda Somaliya ayaa sheegtay Al Shabaab inaysan marnaba is hor istaagi karin gar gaarka kala duwan ee shacabka Somaliyed la gaarsiinaayo.
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Somaliya Eng. C/raxmaan Cismaan Yariisow, ayaa sheegay dowladda inay ka go’an tahay qorshe kasta oo shacabka gurmad lagu gaarsiinaayo.
Wasiir Yariisow, wuxuu sheegay Shabaab inay isku dayaan fal kasta oo ay ku baajin karaan gargaarka shacabka la gaarsiinaayo, balse dowladda waqtiga ugu badan ay ku bixinayso. Wasiir Eng. Yarisow ayaa yiri "Al-Shabaab nagama hor-istaagi karaan gurmadka abaarahad dalka ka socda. Dowladda Federaalku waxey mudnaan gaar ah siisay u gurmadka dadka ay abaarahu saameeyeen, halka kooxaha argagaxisada ee Al-Shabaab ay iyagana mudnaan koowaad ka dhigteen is-hortaaga in shacabkaas tabaaleysan loo gurmado. Wallaalaha Imaaraadka ee noogu yimid inay shacabka gar-gaaraan waxey noo sheegeen inaysan marnaba joojin doonin gar-gaarka ay Soomaalida u fidiyaan waqtigan xasaasiga ah."
Yariisow, ayaa intaasi ku daray in dowladda Federalka Somaliya ay ka go’an tahay gurmad gaarsiinta Bulshada Somaliyed.
“Dowladda Federaalka waxaa ka go'an in dadaal walba loo galo sidii shacabka tabaaleysan loogu gurman lahaa, oo falalka noocan oo kale ahna ay nagu sii dhiirigelinayaan inaan geesinimo ka sii qaadno annagoo kaashaneyna shacabka Soomaaliyeed oo aan labo-jibaarno howlaha gurmadka abaaraha ee hadda u socda si xowli ah." NextDiyaaradihii qaadka Muqdisho keeni ji...PreviousToogasho ka dhacday Degmada Buulaburd...Comments